ओली स्वदेश फर्किएसँगै सक्रिय बालुवाटारमा दाहालसँग छलफल — SuchanaKendra.Com
ओली स्वदेश फर्किएसँगै सक्रिय बालुवाटारमा दाहालसँग छलफल
काठमाडौं, । प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सिंगापुरमा भएको उपचार सकेर शुक्रबार फर्किएसँगै पार्टी र सरकारी कार्यमा सक्रिय भएका छन् । राजधानी दैनिकले खबर छापेकाे छ।
शुक्रबार प्रधानमन्त्री ओली स्वदेश फर्किएका हुन् । स्वदेश फर्किएसँगै नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्न बालुवाटार पुगे ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा ओली र दाहालबीच ओलीको पछिल्लो स्वास्थ्य अवस्था र मुलुकको समसामयिक अवस्थाबारे छलफल भएको बालुवाटार स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
ओली र दाहालबीच पछिल्लो राजनीतिक अवस्था, सरकारको गतिविधि, नेकपा सचिवालय बैठकले गरेको निर्णयलगायतका विषयमा छलफल भएको बालुवाटार स्रोतले बतायो । यसैगरी, पार्टी एकताको बाँकी काम टुंगो लगाउने विषयमा समेत छलफल भएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीका प्रेस विज्ञ डा. कुन्दन अर्यालका अनुसार अध्यक्षद्वयबीच छलफल नियमित कामअन्तर्गत नै भएको छ । स्वास्थ्य उपचारका लागि सिंगापुरबाट फर्किएपछि मुलुक एवं पार्टीको पछिल्लो अवस्थाबारे छलफल भएको उनले बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो स्वास्थ्य अवस्थाबारे दाहाललाई जानकारी गराएका थिए ।
५ भदौमा सिंगापुर गएका ओली दुई साता लामो उपचारपछि स्वदेश फर्किका हुन् । मृगौलासम्बन्धी एन्टिबडीको उपचारका लागि सिंगापुरको नेसनल युनिभर्सिटी अस्पतालमा प्रधानमन्त्री ओलीको उपचार भएको थियो ।
उपचारकै क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले दुईपटक टेलिप्रिजेन्स प्रविधिमार्फत मन्त्रिपरिषद्का सदस्यसँग सरकारका कामको बारेमा छलफल गरेका थिए । शनिबार आरामसँगै भेटघाट गर्ने र आइतबारदेखि प्रधानमन्त्री ओली नियमित काममा फर्किने अर्यालले बताए ।
प्रधानमन्त्रीका निजी चिकित्सक डा. दिव्यासिंह शाहले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको जनाएकी छन् । डा. शाहका अनुसार शरीरमा बढी मात्रामा रहेको ‘एन्टिबडी’लाई वैज्ञानिक प्रविधिबाट हटाउने उपचार प्रक्रिया एनयूएचमा पूरा भएको छ । प्रधानमन्त्री ओली आफ्नो नियमित कामलाई निरन्तरता दिन सक्ने उनले जनाएकी छन् ।